Bahrain, sariitatra maromaro sy resaka mafana · Global Voices teny Malagasy
Bahrain, sariitatra maromaro sy resaka mafana
Voadika ny 30 Oktobra 2018 5:24 GMT
(Lahatsoratra efa tamin'ny volana Febroary 2006)
Tsy zava-miavaka ny adihevitra momba ny sariitatra ao Bahrain na Afovoany Atsinanana tamin'ny herinandro lasa teo. Nalaza teo amin'izao tontolo izao Io lohahevitra io; ao ny manohana ary ao ireo manohitra ny fanehoana ny Mpaminany ny silamo tsy tamin'ny endrika an-tsary fotsiny, izay raisin'ny Miozolomana ihany fa fitenenan-dratsy, fa koa heverina ho vetaveta, tsy manaja sy tsy miraharaha ny kolontsaina ny fanehoana azy.
Ampy ny milaza fa ny ankamaroan'ireo bilaogy Bahrainita dia nanoratra momba io lohahevitra io, Haitham no voalohany namoaka ny tantara tao amin'ny tontolon'ny bilaogy Bahrainita tamin'ny 11 janoary 2006 niaraka tamin'ny fanehoan-kevitra marobe, narahina adihevitra maro momba ny Den An'i Mahmood tamin'ny lahatsoratra telo: ny voalohany, dia niampanga ny parlemanta Bahrainita ho manao toe-jaza sy mampihomehy izy noho ny fandravan-dry zareo ny fetiny ka manohy fivoriana tsy ara-potoana mba hangataka fotsiny fialantsiny avy amin'i Danemarka, mandrisika ny olona sy ny mpandraharaha hanao ankivy ny entambarotra Danoà ary miantso fihetsiketsehana manerana ny firenena, mifanohitra tanteraka amin'ny fitsipika sy ny lalàna izay heverin'izy ireo fa mametra ny fahalalaham-pitenenana sy ny fahalalahana manokana ao Bahrain, ny lahatsoratra faharoa dia nivoaka rehefa fantatra fa nisy gazety frantsay namoaka indray ilay sariitatra ary ny fahatelo dia taorian'ny fihetsiketsehana miisa 25 teo ho eo taorian'ny vavaka Zoma ahitana sarin'ny mpikambana ao amin'ny parlemanta mandoro ny sainam-pirenena Danoa.
Na ny iray tamin'ireo manam-pahaizana ao Bahrain izay manana bilaogy malaza aza mba niresaka momba ilay sariitatra koa; na izany aza, noho ny fahasahiranany, dia nisongadina teo amin'ny pejy voalohan'ny gazety nasionaly iray izy ary voampanga ho nanambany ny Mpaminany tenany (arabo) Mazava ho azy, fa ity gazety Al-Watan ity dia naneho fotsiny ny tenany ho toy ny gazetin-dokambarotra fotsiny ihany.
Nanome ny iray tamin'ireo fanadihadiana mafonja nataony ho an'ireo lehiben'ny tonian-dahatsoratry ny gazety ao an-toerana ny mpanjaka, izay nametrahany ny drafi(tra)ny ho avy ary nankasitrahan'ny rehetra, indrindra indrindra fa nampanantenaina hamely ny kolikoly ny lahateniny, ary hanome trano fonenana sy tany mora vidy ho an'ny olom-pirenena tsirairay ary hampitsahatra ny vanim-potoanan'ny toerana ministerialy naharitra am-polony taona.
Nanatrika sy nandray fitenenana tamin'ny Forum Al-Jazeera faha-2 i Haitham Sabbah ary niresaka momba ny Media Vaovao: bilaogera sy asa fanaovan-gazety ifarimbonana izay nahafahany nanokatra ny mason'ireo tonian-dahatsoratry ny gazety nentim-paharazana manoloana ny tontolon'ny bilaogy sy ny fanaovan-gazetin'olom-pirenena. Gaga izy fa tao anatin'ny mpandray anjara fitenenana momba ny fibilaogina ny iray tamin'ireo tonian-dahatsoratra izay tsy nahalala akory momba ilay fitaovana (mediam-bahoaka)!
Ali Al-Saeed indray nandray anjara tamin'ny fiarahana-mamokatra fanadihadiana vaovao momba ny vehivavy mahomby ao Afovoany Atsinanana, antsoina hoe Models of Success ary nanoritsoritra ny fandaharam-potoanan'ny andro roa voalohany fakàna sary, ary mahafantatra izay tena ataon'ny mpamokatra. Toa tena orinasa nahafinaritra sy nanome fahalalana ho an'i Ali izany.
Manama Republic kosa misaintsaina momba ny ezaka toa fahatsiarovan-tena nataon'ny governemanta, izay nosoloin'ny Minisiteran'ny raharaha Islamika tena, mba handratrana ny fahatsapan'ny ankamaroan'ny mponina ao Bahrain amin'ny fampiantranoana ny “Wahabifest” amin'ny fotoana izay ahatsiarovan'ny Shiita – izay mandrafitra ny 70% ny mponina – ny maritiora Imam Hussain – zafikelin'ny Mpaminany – amin'ny fetibe Ashura.
Manama Republic no hany bilaogera Bahrainita naneho hevitra momba ny fahafatesana mampalahelo nahazo tovovavy iray – Fatima Jaffar – satria main'ny herinaratra tao an-tranony izy noho ny tsy fetezan'ny tariby mitondra herinaratra. Taribin'ny herinaratra izay tsy vitan'ny fianakaviana ny nanamboatra azy noho ny fahantran'izy ireo tanteraka.
Toerana mahafinaritra tsara tsidihana ho an'ireo tantara rehetra ireo sy ny maro hafa ny mpanangom-baovao “Bahraini Blogs” ao amin'ny http://bahrainblogs.org/ izay ahitana fanavaozam-baovao avy amin'ny bilaogy Bahrainita isan'ora.